The Waxyaabaha Fiican Si Ma In London Oo Sida loo Waxaa Hel | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska > The Waxyaabaha Fiican Si Ma In London Oo Sida loo Waxaa Hel
The Waxyaabaha Fiican Si Ma In London Oo Sida loo Waxaa Hel
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska
(Last Updated On: 20/09/2021)
Marka ay timaado in booqashada caasimadaha ugu caansan Yurub, London shaki la’aan waxay ugu sarraysaa liiska dalxiisayaasha kasta waxaana jira waxyaabo badan oo London laga sameeyo. Waxaa la helay muddo dheer ah, taariikh xiiso; durkiya qurux badan oo indhaha ku; oo waxaa jira waxyaabo badan oo ay halkaas ku samayn. Haddii aad tahay qof sahlan-socda dalxiiska oo doonaya in la barto ee degaanka dhaqanka, ama dalxiisto ah raadinayso farax, London waxay leedahay wax dukaanka kuu.
Dabcan, kale oo aan ahayn garanaya oo ku saabsan wixii aad samayn lahayd ee London, waxa kale oo muhiim ah in la ogaado ee logistics safarka aad. Helitaanka waxaa tareen waa mid ka mid ah fursadaha dabiiciga ah ugu, gaar ahaan haddii aad u socoto magaalooyinka Yurub ugu waaweyn sida Paris, Amsterdam, ama Berlin. Halkan muuqaalka guud ee hawlaha London iyo tareenada oo kaa caawin doona qorsheeyo aad fasax:
Maqaalkan ayaa loo qoray wax ka baro Safarka waxaana sameeyay Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
Waxyaabaha Our jeceshahay inaad qabato gudaha London
In magaalo sida weyn sida London, gaabiso hoos liiska hawlaha si ay fursado yar waa macquul. Waxaad ma arki doono oo dhan indhaha ku ah iyo qabsado oo dhan dhab ah waayo-aragnimada London inta lagu guda jiro hal booqasho. Taasi waa sababta aynu ku talineynaa dejinta mudnaanta aad ka hor.
Kuwa idinka mid ah oo raadinaya Waxyaabaha London Lagu Sameeyo ee la xiriira shopping, suuqyada kala duwan noqon doonaa muujiyo of booqashadaada. Ma waxaad raadineysaa dhab ah, cuntada deegaanka? Fiiri Suuqa Degmada iyo muunad ay farxaan gastronomic, ama cuno mid ka mid ah maqaayadaha ku dhow. Haddii aad ka badan in niyadda u tahay qaar ka mid ah shopping dukaan waaxda, Liberty waa meel fiican. Haddii kale, tag ugaarsadaan qaar ka mid ah waxyaabaha qadiimiga qabow ee Suuqa Portobello Road.
Haddii booqashadaydii London ayaa ka badan oo qof waxbarasho, booqo qaar ka mid ah goobaha dhaqanka ee magaalada. From dhigta dib u dhiska Shakespeare ee Globe barashada ku saabsan Tower of London, aad leedahay doonaa fara badan in ay sameeyaan. Waxa kale oo aanu ku talinaynaa lahaa riyaaqayaa farshaxanka casriga ah ee Modern Tate ku Bank Koonfurta, iyo sidoo kale booqanaya Xarunta SouthBank.
Utrecht in Tareenada London
Antwerp in Tareenada London
Strasbourg si Tareenada London
Luxembourg in Tareenada London
In London lagu tago tareen laga soo raaco Paris, Amsterdam, iyo Berlin
Waxaad ka gaari karin London Paris, Amsterdam, iyo Berlin si fudud via Eurostar, Intercity, iyo tareenada Thalys. Qaar ka mid ah meelaha laga bilaabo yeelan doontaa hab more dabiiciga ah ee gaarey London ka badan kuwa kale. Tusaale ahaan, aad fuulaysid kartaa Eurostar-xawaaraha sare si toos ah tababaraan si ay u London ka Paris, oo waxaa jiri yar ka badan laba saacadood iyo badh.
Marka ay timaado in safraya London ka Amsterdam iyo Berlin, From Amsterdam, waxaad si toos ah u qaadan kartaa Eurostar ama ikhtiyaar kale oo wanaagsan ayaa ah inaad marka hore tagto Brussels adoo maraya Thalys ka dibna fuulaysid Eurostar ee Brussels London. The safarka qaadataa qiyaastii afar saacadood jidkaas oo waa jidka ugu dhakhsaha badan si ay u gaaraan London ka Amsterdam oo tareen.
Helitaanka caasimada UK ka Berlin tareen u baahan tahay laba iskujoog. Lugta kama dambaysta ah ee safarka waa isku mid sida laga soo Amsterdam, ka dibna loo hoydo Eurostar. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaar kale ayaa ah in lagu tababaro safarka Berlin ilaa iyo Cologne, meesha aad doonaynin fuulaysid tareen si ay u Brussels. waa tareenka ugu dhaqsiyaha badan safarka Berlin ilaa London waxayna qaadataa waxoogaa ka yar 10 saacado kadibna waxaad samayn kartaa dhammaan waxyaabihii aad ka baratay waxyaalaha London lagu sameeyo.
Ready in Hel London?
Haddii aad go'aansatay in waxa aad jeceshahay inaad qabato gudaha London noqon doonaa, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad safarka! Helitaanka waxaa tareen waa ay fududahay, sidaas tago oo jartaan kuraasta aad u fasax cajiib ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-things-to-do-london%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveluk europetravel London tareen safarka uktravel
Best Holidays Canal Oo River Doon In Europe
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe